मलेसियामा अवैधानिक बसेकालाई अस्थायी श्रम स्वीकृति दिइने ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा अवैधानिक बसेकालाई अस्थायी श्रम स्वीकृति दिइने !
मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी कामदारहरुलाई ‘अस्थायी श्रम स्वीकृति’ दिने भएको छ । मंगलबार विदेशी विदेशी एवं गैरकानुनी कामदारबारे संसदीय समितिको बैठकपछि मलेसियाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले उक्त कुरा बताएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रहरुमा भएको माग पूर्ति गर्न र गैरकानुनी कामदारको संख्या घटाउन यस्तो अवसर दिन लागेको हो । यो निर्णय लागू भएमा यहाँ गैरकानुनी अवस्थामा रहेका रहेका हजारौं नेपालीले बैधानिकता लिएर रोजगारी गर्न पाउनेछन् । यद्यपि यो निर्णय मलेसियाली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानुनी प्रक्रियाबारे टुंगो लागिसकेपछि मात्र लागू हुने जनाइएको छ । गैरकानुनी कामदारले बैध हुन पूरा गर्नुपर्ने पूरा प्रक्रिया एवं शुल्क र समयावधिबारे पनि हाल केही पनि खुलाइएको छैन ।
थप चार क्षेत्र खुला
यसैबीच विदेशी कामदारका लागि रोजगारीका विभिन्न चार क्षेत्रहरु पनि खुला गरिएको जनाइएको छ । मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारका लागि अस्थायी श्रम स्वीकृति लिई सेवा, निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रका साथै पोल्ट्री फार्म, खानी तथा उत्खनन्, कार्गो ह्याण्डिलिङ र ट्राभल एण्ड टुरिजम् लगायत चार क्षेत्र समेत खुला गरिएको उल्लेख गरेको छ । समाचारहरुअनुसार यीमध्ये उत्खनन् र टुरिज्म क्षेत्र आगामी सन् २०२० सम्मका लागि खुला हुनेछ ।
मलेसियालाई गैरकानुनी कामदारसम्बन्धी समस्या मलेसियालाई ठूलै पिरलो हुँदै आएको छ । आगामी सन् २०२० सम्ममा आफूलाई विकसित राष्ट्रको रुपमा उभ्याउने लक्ष्य बोकेको मलेसियाले गैरकानुनी कामदारका लागि दिएको झण्डै ७ वर्षयताको यो चौंथो ठूलो अवसर हो । यसअघि पनि यस्तै अवसरहरु दिइएको थियो र हजारौं नेपाली बैध भई कार्यरत छन् भने अन्य हजारौं नेपाली आममाफी प्रक्रियाअनुरुप स्वदेश फिरिसकेका छन् । करिब २२ लाखभन्दा बढी बैधानिक अवस्थामा कार्यरत आप्रवासी कामदार रहेको मलेसियामा अझै पनि लाखौंको संख्यामा गैरकानुनी अवस्थामा रहेको अनुमान छ ।